4 Ciyaarood iyo 12 Maalmood: Real Madrid Oo Maraysa Imtixaano Aan Nasasho Lahayn Ka hor sannadka cusub ee 2020 - Gool24.Net
Real Madrid ayaa kulamo musalsal ah oo nasashadu ku yartahay geli doonta maalmaha kooban ee ka hadhay sannadka cusub ee 2020, kuwaas oo qaabayn doona sida uu noqonayo xili ciyaareedka Los Blancos iyo halka ay kaga dhamaysan karto horyaalka LaLiga ee ay hadda isku eryanayaan Barcelona.
Los Blancos waxay hore ugu soo baxday wareegga 16-ka ee tartanka Champions League, hoggaanka horyaalkana waxay wada-jir u hayaan Barcelona oo farqiga goolasha kaga sarraysa, laakiin 12 maalmood gudahood wax badan ayaa isbeddeli karaya maadaama jadwal cidhiidh ah uu kusoo waajahan yahay.
Zidane oo ay ka dhaawacan yihiin xiddigo waaweyn oo ay ka mid yihiin Eden Hazard, Gareth Bale, Marcelo, Asensio iyo Vazquez, waxay Arbacada ka hor tegi doontaa Club Brugge kulanka ugu dambeeya ee marxaladda Groups-ka Champions League.
Waxa ugu xigi doonta Valencia oo ay u tegi doonto Axadda, laba maalmood kaddibna waxay Camp Nou marti ugu noqon doontaa Barcelona, ka hor inta aanay December 22 foodda gelinin Athletic Bilbao.
Afartan ciyaarood ee xidhiidhka ah, gaar ahaan saddexda LaLiga, waxay Real Madrid uga baahan tahay natiijooyin wanaagsan si ay horyaalka ugula hirdami karto Barcelona, haddii ay khasaare kasoo hoysana waxay dhibaato ku noqonaysaa hammigooda xili ciyaareedkan.